Kedu ihe eji arụ ọrụ nke ahịhịa ahịhịa
Kedu akụrụngwa nke igwe eji asụ ahịhịa nwere? Zhengchida Blade Factory ga-eme nyocha ọkachamara maka anyị. Ngwa akụrụngwa bụ ihe dị mkpa na-ekpebi arụmọrụ nke ngwa ọrụ, nke nwere nnukwu mmetụta na arụmọrụ nhazi, mma nhazi, ọnụahịa nhazi ...
Fọdụ ahihia eji asụ ahịhịa eji gị amaghị
Anyị maara na e nwere ọtụtụ ụdị nke ahịhịa ahịhịa pupụtara, ya mere ọ na-esiri anyị ike ịhọrọ. Kedu otu esi ahọrọ ahịhịa ahịhịa? Kedu otu esi edozi agụba nke igwe? Na otu esi eji ma debe ahihia ahihia ahihia? Onye editọ na-esonụ ga-ewebata gị. Otu esi edozi agụba nke la ...
Esi Wụnye Mower Mulching Blade
Dị ahịhịa ahịhịa ahịhịa: Ndị na-eji ahịhịa ahịhịa na-ejikarị ụdị blad. Ọkarịrị, onye na-eji igwe ihe eji egbu osisi. Obe a na-egbuputa ahihia ma na-apuputa ya site n'akuku uzo nke igwe ihe ahu. A na-ejikwa ya agụba mulching. Emere nke a iji belata ahihia otutu oge ma gbanwee ahihia ...